जनताको आशा, धर्मराज अर्यालमा भरोसा - Nepal News - Latest News from Nepal
सरकार निर्माणमा मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह
नगरपालिकाको कार्यालय सारेपछि वडाध्यक्ष विरोधमा
आगलागीबाट ७० लाखको क्षति
“झ्यानाकुटी” लाई दर्शकको साथ
८ सय भेँडा सडकको दौडादौडमा
बलिउड नायिका कंगनाको झाँसी रानी लुक्स
जनताको आशा, धर्मराज अर्यालमा भरोसा
By nepalnews	 Last updated Nov 28, 2017
काठमाडौं १२ मंसिर । नेपाली कांग्रेस नेता धर्मराज अर्याल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ स्थित प्रदेश सभा ‘ख’ का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार हुन् । बर्षौँदेखि सोहि क्षेत्रमा समाजसेवा तथा राजनीति गर्दै आएका अर्याल स्थानीयस्तरमा लोकप्रीय नेता हुन् । कांग्रेसको स्थानीय ईकाई अध्यक्षदेखि क्षेत्रीय अध्यक्षसम्म भएर पदमा रहँदा वा नरहँदा जनताकै बिचमा रहदै आएका अर्यालको उम्मेदवारी बाम गठबन्धनका उम्मेदवारका लागि ठूलो चुनौति बनेको छ ।
बाम गठबन्धनबाट सोहि क्षेत्रका प्रदेश ‘ख’ मा प्रकाश श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् भने उनीविरुद्ध बिदुर धमलाले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । आफैमा लोकप्रीय कांग्रेस नेता अर्याल आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गर्छन् । जनताको घरदैलोमा मत माग्दै हिडिरहेका उनै अर्यालसँग अनलाईनपाना टिमले चुनावी माहौलको बारेमा कुरा गरेको छ ।
कांग्रेसजस्तो ठूलो राजनीतिक शक्तिले राप्रपासँग गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि यस क्षेत्रमा राप्रपालाई छोडेर प्रदेशसभामा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार उठाएको छ,पार्टीभित्र असन्तुष्टी छ कि मेटियो ?
नेपाली कांग्रेसले राप्रपासँग गठबन्धन गरेर यस क्षेत्रमा राप्रपाका उम्मेदवार अगाडी सार्दा केहि साथीहरु असन्तुष्ट थिए । कांग्रेसभित्र धेरै बर्षदेखि काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ । तर हामीले छलफल ग¥र्यौँ । पार्टीभित्र बर्षौँदेखि लागेर ठूलो लगानी भएका साथीहरु असन्तुष्ट भएपनि छलफलपछि उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि अहिले हामी उम्मेदवारहरुकै पक्षमा भोट माग्दै हिड्नुभएको छ ।
यसकारण लोकतान्त्रिक गठबन्धन यसक्षेत्रमा शक्तिशाली बन्दै गएको छ ।तपाईको स्थानीय एजेण्डा के छन् ?
विशेषगरी सडक,खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका कुरा त परिहाल्छ । भएको विकास र बाँकी गर्नुपर्ने विकासलाई प्राथमिकता दिने मेरो उद्धेश्य छ । त्योसँगै महत्वपूर्ण कुरा भनेको खोला किनारबाट बाटो लाने कुरा कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । यस क्षेत्रमा भएका खोला किनारहरुमा भएका सडकलाई गुणस्तरी बनाउनुपर्ने छ । त्यहाँको अवस्था हेरेर नयाँ बाटो लैजानुछ ।
बाटो नभएको डाँडाकाडाहरुमा बाटो लैजानुछ । डाँडामा बस्ती बनाएर समथर उर्वर भूभागमा खेती गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने लाग्छ ।डाँडा क्षेत्रमा पनि साना ठूला बाटो बनाएर व्यवस्थित बस्ती,शहरको विकास गर्ने तथा तल भने उद्योग कलकारखाना बनाउने,स्कुल,कलेजहरु खोल्ने तथा खेती गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो मुख्य उद्धेश्य खोला खोल्सीको किनारबाट गुणस्तरीय बाटो बनाउने यस क्षेत्रको सडक,विद्युत,खानेपानी लगायतको समस्या समाधान गर्ने मेरो एजेण्डा हुन् । उर्वर भूमिमा बढिरहेको अव्यवस्थित बसोबास र शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउदै खेतीयोग्य जमिन जोगाउनुपर्छ ।
तपाईको एजेण्डा त यी हुन्, यद्यपी तपाईलाई नै भोट दिनुपर्ने अरु आधारहरु के के छन् ?
एउटा त नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रवादी शक्ति हो । ०७ सालपछिका हरेक महत्वपूर्ण परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसको बिचार राम्रो छ । संसदीय व्यवस्था नमान्ने बामपन्थीहरु अहिले संसदमा आएका छन् । मेरो उम्मेदवारी र नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पत्याउने यो नै महत्वपूर्ण आधार हो । दोस्रो मैले यो क्षेत्रमा सामाजिक काम र विकास निर्माणका काममा लागिरहेको छु ।
पद नहुँदा पनि म जनताको बिचमा निरन्तर छु । पार्टीभित्र पनि इकाई सभापतिदेखि क्षेत्रीय सभापति भइयो । जनतालाई साथसहयोग आवश्यक पर्दा,दुःख पर्दा, हस्पिटल जानुपर्दादेखि विभिन्न सुखदुःखमा सरिक हुनुपर्ने मामिलामा पद छैन भनेर म पछि हटिन । राजनीति गर्ने व्यक्तिले सारा जनता आफ्नै हुन्,आफ्नै परिवार हुन् भनेर लागिपरेँ । यीनै नै मेरो आधार हो ।
तपाईको क्षेत्रमा बाम गठबन्धनका प्रदेशसभामा बागी उम्मेदवार पनि रहेछ । तपाई आफ्नो जितमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
उम्मेदवार पाउनुअघि नै म ढुक्क थिएँ । उम्मेदवारी पाइन्छ या पाइन्न भन्नेमा बरु ढुक्क थिएन । कांग्रेसका जसले पाएपनि यो पटक यस क्षेत्रबाट बिजयी हुने निश्चित नै थियो । किनभने बर्षौँदेखि कम्युनिष्टले यस क्षेत्रबाट बिजयी हुदै आएपनि उनीहरुले यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरे । जितेर गइसकेपछि नेताहरु गाउँघर र आफ्नो क्षेत्रमा नै आउदैनन् ।
जनताहरु बामपन्थीबाट दिक्क भइसकेका छन् । ०४८ सालपछिबाट यस क्षेत्रबाट जो जो बामपन्थीहरुले जित्नुभयो,पार्टी फुट लगायत विभिन्न कारणले उहाँहरु गुमनाम हुनुहुन्छ । समाजसेवी हो यसैलाई मत दिनुपर्छ भनेर मेरो पक्षमा मत हाल्न आतुर मतदाताहरु धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरुको बागी हुँदा वा नहुँदापनि मलाई चिन्ता छैन । जित सुनिश्चित छ ।
स्थानीय एजेण्डासँगै राष्ट्रिय एजेण्डालाई पनि यहाँका जनतालाई हेर्छन्, कांग्रेस र राप्रपाको चुनावी तालमेलपछि एजेण्डाबारे कसरी बुझाउदै हुनुहुन्छ ?
मुलुकमा ठूलो समस्या आइसकेपछि ठूलो समस्याका अगाडि सानो समस्या देखिदैन । लोकतन्त्रको स्थायीत्व हुने कि नहुने भन्ने नै अहिले मुलुकको समस्या हो । लोकतन्त्र रहने सवालमा जनताहरुले अहिले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मत दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राप्रपाले बोकेको राजसंस्थाको बारेमा त पछि कसरी अघि बढ्छ जनताकै हातको कुरा हो ।
कम्युनिष्ट आइसकेपछि लोकतन्त्र सकिने हो र ?
लगभग जाला । उहाँहरुले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद भन्नुभएको छ । अर्कोतर्फ कम्युनिष्टको चुनावी जुलुस अघि बढिरहँदा आम जनता त्रसित भएको अनुभूति गर्नुहुन्छ । तर लोकतान्त्रिक शक्तिको चुनावी जुलुस जनताको घरदैलोमा पुगिरहँदा उहाँहरु घरअगाडि निस्केर साथ समर्थन जनाउनुहुन्छ । सल्लाहसुझाव दिनुहुन्छ र समर्थन जनाउनुहुन्छ ।
एकातर्फ लोकतान्त्रिक गठबन्धन र अर्कोतर्फ बाम गठबन्धनको चुनावी घम्साघम्सी भईरहँदा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ, यस क्षेत्रमा तपाईहरुले कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले काठमाडौंको जनताले पैसा दिएको भरमा भोट हाल्छन् भन्ने कुरामा म विस्वास गर्दिन । यहाँका मतदाताले खर्च गर्ने,बढि तडक भडक देखाउनेलाई विस्वास गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । समाजसेवा,आफ्ना गतिविधिबाट नै जनताको मत जित्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।
गुण्डागर्दी र निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने ३९ जनालाई पक्राउ
चार महिनापछि जनही २५ हजार रुपैयाँ राहत तराईका जनताले पाउने
प्रदेश २ मा मधेशवादी दलको सरकार